Barlaamaanka oo ka doodaya muddo kororsi | KEYDMEDIA ONLINE
Barlaamaanka oo ka doodaya muddo kororsi
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loo qeebiyay sharci loogu madag daray Jiheynta doorashada dalka, taasoo muujineysa in la laalay doorashadii dadbaneyd ee dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanada Golaha Shacabka BJFS ayaa loo qeybiyay sharci loogu magac daray Jiheynta doorashada dalka taasoo muujineysa in la laalay doorashadii horay loogu heshiiyay ee ay madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka isku af garteen, Golaha Shacabkana ay ansixiyeen taasoo ahayd doorasho dadban.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ka dooday qodobkaas isaga ah, waxaana la dhagaystay aragtida Xildhibaanada Golaha ee ku kala aragtida duwan in wax laga baddalo meeshana laga saaro heshiiskii 17 -ka September ee ahaa in Doorasho Dadban la aado.
Weli waxaa socda aragtiyada Xildhibaanadu ay ka qabaan qodobkaas oo dood weyn dhaliyay.
Halkan hoose ka eeg qodobka shakiga dhaliyay ee caddeynaya in muddo kororsi laba sano ah loo bareerayo: